Ingxaki nge-403 Iphutha elingavumelekanga - ii-Geofumadas
403 ingxaki Akuvunyelwe Imposiso
Ngaphezu kweyodwa into efana nale yenzekile kuthi, kwaye xa sifaka isayithi lethu umyalezo olandelayo uvela:
Awunayo imvume yokufikelela /index.php kule seva.
Ukongezelela, i-403 iphoso engavumelekanga idibene nayo ngelixa lizama ukusebenzisa i-ErrorDocument ukujongana nesicelo.
Apache mod_fcgid / mod_auth_passthrough 2.3.5 / 2.1 mod_bwlimited / ekhasini 1.4 / 5.0.2.2635 80 Server e Port geofumadas.com
Kukho ezahlukeneyo ze iphutha elifanayo, ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, kodwa ukuba unalo kwisiza esingethwe WordPress kwaye ukuba ukusebenza ngaphakathi kwiqela lenjongo admin, ngoko oku kwenzeke, kufuneka ukuba wenza isenzo luthintithayo yanyanzela ukuqapha Apache nokuthintela ngokuzenzekelayo (kuthunyelwa phambili). Kwimeko yam kwenzeka kum maxesha amaninzi, afana:
Ukuba nekhasi elikhulu lekhaya elilayishiwe, ngokuqhelekileyo ngeempendulo ezininzi okanye i-tinthumb edumileyo efuna ukunyanzelisa imveliso yeemifanekiso ezininzi.
Qalisa iskripthi esinzima kakhulu, njengendlela yokulungisa-redirect eneenkcukacha ezininzi ezikhethiweyo. Ngoku WordPress ikuvumela ukhethe inani iirekhodi ezifakwe lula izinto ezininzi kodwa kuyingozi ukuba senze utshintsho olukhulu kuloo deployment.
Sifanele siqinisekise ukuba kuphela yinkinga yokukhusela kwikomiti lethu, kuba ngezinye i-browser iyanzima kunye nekhukhi. Ukucima i-cookie cache yi-exit, kodwa isalathisi esihle kakhulu Woopra, kuba sikwazi ukubona ukuba abanye abasebenzisi bafikelela kwamanye amazwe kwaye yinto ingxaki yethu. Emva koko kufuneka uqaphele ukuba yiphi ifayile ekhutshiwe. Kwimeko eboniswe yi-index.php.
Emva koko kufuneka uye kwi-cpanel uze uzame ukufikelela kwethu kusenza sikwazi ukuqamba kwakhona. Ndandibona ukuba lo isalathisi wadalwa umyalezo ibhloko kunye isalathiso oyinyaniso sibizwe index.php.wpau.bak.
Kuxhomekeke kwiyiphi ifayile kunye nokuba kutheni ivalwe, inokwenziwa kwiCpanel:
Qamba kabusha kwaye uyitshintshe enye yangaphambili.
Tshintsha iimvume kwi-644
Khuphela ulayishe ukutshintshwa
Yilungise ngo-ftp noDreamweaver.
Singawubuyisela umyalezo, kuxhomekeke kwisenzo "ukuqamba ukusebenza kwakhona kwehlulekile kuba akuvumelekanga ku ..."
Oku kuya kusinika ingcamango ukuba yonke ifolda_html ifolda ivaliwe. Oko kuthetha ukuba umsebenzisi wethu uvaliwe kule nto.
Ayikho enye indlela ngaphandle kokubiza umninimzi wesizinda, kwaye umcele ukuba akwenze; kodwa kufuneka uthembeke kwaye umxelele oko senze kunye noko sicinga ukuba kubangele ingxaki. A uphawu ezimnandi zezokuba ukufikelela WP-admin lukwazile, oko kuthetha ukuba balindele wena ukusombulula ingxaki yangaphakathi okanye kwidilesi ye IP yomncedisi we khomputha yakho ukuze ufake panel admin.
Umlawuli okhuselekileyo wokusingatha uya kuba sele ethola ithikithi esuka kubaphathi be-hostgator, evakalisa ingxaki kwifom:
Ndiyaxolisa kodwa siye sanyanzeleka ukuba gxotha i "/home/geofumadas/public_html/index.php" yaye "/home/geofumadas/public_html/xmlrpc.php" zeempendulo njengoko Babizwa ababuthela umthwalo phezulu ku mncedisi engakhethwanga kwaye, ngenxa Ubume beengxaki, sanyanzeliswa ukuba sithathe isinyathelo ngokukhawuleza kwimpilo yomncedisi ...
Emva koko bacebisa izenzo ezithe zazingabangela ingxaki kunye nezindlela ezinokwenzeka zokwenza inkonzo isebenze ngakumbi.
Ukuba siqinisekile malunga neengxaki, kwaye asikholelwa ukuba sinomnye uhlobo lwesithuba, kufuneka acele ukuba akhululwe. Baya kwenza uvavanyo kwaye baya kubuyisa ukufikelela.
Ngolandelayo kufuneka siqaphele ngokusetyenziswa kweempendulo ezinzima.
Post edlulileyo«Edlulileyo Umgca we52
Post Next Izifundo ezintsha ze-e-learning Iqela leDMSOkulandelayo "